अग्ला हिल भएका जुत्ता लगाउनुहुन्छ ? मेरुदण्डको समस्या आउला नि ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»अग्ला हिल भएका जुत्ता लगाउनुहुन्छ ? मेरुदण्डको समस्या आउला नि !
अग्ला हिल भएका जुत्ता लगाउनुहुन्छ ? मेरुदण्डको समस्या आउला नि !
By लाल्टिन डट कम June 15, 2022 No Comments2 Mins Read
प्राय: शहरी महिला अग्ला हिलयुक्त जुत्ता–चप्पल लगाउन मन पराउँछन्। हुन त आजकल, गाउँमा फेसनेवल महिलाहरुको कमी छैन। हिलयुक्त जुत्ता–चप्पल लगाएर युवतीहरू आफूलाई ग्ल्यामरस देखाउन खोज्छन्। कम उचाइ भएका युवतीहरू आफूलाई अग्लो देखाउन यस्ता जुत्ता–चप्पल लगाउँछन्।
फेसनेवल देखाउन र आत्मसन्तुष्टिका लागि प्रयोग गरिएका यस्ता जुत्ता–चप्पलले स्वास्थ्यमा भने गम्भीर खालका समस्या निम्त्याउन सक्छ। अग्ला हिलयुक्त जुत्ताले तत्कालीन रूपमा दुर्घटनाको खतरा बढाउँछ भने दीर्घकालीन रूपमा शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्या सिर्जना हुन्छ।
हिल लगाउँदा शरीरको सन्तुलन मिल्दैन। अग्ला हिल लगाएर बाटोमा हिँड्दा दुर्घटनाको डर हुन्छ। नमिलेको, ओह्रालो बाटोमा हिल सजिलैसँग अड्याउन गाह्रो हुने समस्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा लडेर ठूला चोटपटक लाग्ने तथा हात खुट्टा भाँचिने खतरा हुन्छ।
लामो समयसम्म अग्ला हिल भएका जुत्ता–चप्पल लगाउँदा खुट्टामा समस्या देखिन्छ। यसले खुट्टाको स्वरूप नै बिगार्ने, सुन्निने, लगातार खुट्टा दुख्ने तथा नसामा समस्या आउनेजस्ता समस्या देखिन्छन्। यसका कारण खुट्टाको अगाडिको नसा र कुर्कुच्चा सुन्निने समस्यासमेत हुन्छ।
पैताला दुख्ने समस्या समेत आउँछ। यस्तै पैतालाको मांसपेशी तन्किएर दीर्घकालीन रूपमा नसासम्बन्धी रोगको सम्भावना समेत बढ्छ।
अग्लो हिल लगाउँदा कालान्तरमा घुँडा र मेरुदण्डमा नकारात्मक असर पार्छ। घुँडामा अतिरिक्त दबाब परेर अर्थाइटिस, ब्याक पेन, मांसपेशीमा दुखाइजस्ता समस्या देखिन्छन्। त्यस्तै कम्मरको नसामा समस्या देखिनुका साथै साइटिका नामक रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ।
यसकारण, अग्ला हिल भएका जुत्ताको निरन्तर प्रयोग नगरौँ । कहिलेकाहीँ लगाए यसले धेरै असर नगर्ला तर निरन्तर प्रयोग गर्दा पक्कै पनि तपाईंलाई हड्डीको समस्या देखिन्छ ।